Nhau - Pemberera zvine hushamwari DTS Nestlé Turkey chirongwa chakabudirira kupasa Nestlé's Temperature Distribution Testing
Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd., semutungamiri mune zvekudya zvekudya uye chinwiwa chekudzivirira indasitiri, yaenderera mberi nekuvandudza munzira inoenda kumberi, uye yakunda kuzivikanwa kubvumirana uye kuvimba kwevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Zvakakodzera kutaura mumapurojekiti mazhinji kuti gore rino DTS yakahwina yakagadzirira-kunwa kofi chirongwa cheNestlé Turkey OEM kambani, ichipa yakazara seti yemidziyo yemvura yekutsikisa rotary sterilization retort, uye kumisikidza nemuchina wekuzadza weGEA muItaly uye Krones kuGerman Munguva iyi, kubva mukugadzira nekugadzirisa, kusvika kuFAT, kumisikidza nekuraira panguva imwe chete; "iva nesimba rinogutsa", DTS timu yakasimba zvirevo zvemhando yepamusoro, yakasimba uye zvine hungwaru mhinduro, yakakunda mutengi wekupedzisira, United States Kurumbidzwa kwevaNestlé nyanzvi uye vekuSouth America vechitatu-bato retifiketi vashandi. Mushure memazuva anopfuura gumi ekubatira pamwe kushandira pamwe, kugoverwa kwekupisa kweiyo DTS sterilizer mune yakamira uye inotenderera nyika inonyatsokwanisa, uye yakabudirira kupfuudza kusimbisa kwakasimba kweNestlé.
Chii chinonzi kupisa kupisa? Nei ongororo yekupisa ichikosheswa nevatengi vekumusoro-soro? Ndeapi mabhenefiti ayo DTS anofanirwa kuve anokodzera basa iri?
Thermal ongororo, ndiko kuti, kana uchiita kupisa kurapwa pachigadzirwa, simbisa kuti tembiricha yechikamu chega chega chemidziyo yekupisa yekushambidza yakafanana uye inowirirana panguva yekudzvinyirira nguva dzese tembiricha maitiro, uye wozoona kana nzira yekudzivirira inogona kuwana kuchengetedzeka kwechikafu, nekudaro kugadzirisa maitiro ekuvandudza mhando yechigadzirwa uye kupfupisa nguva yekuita. Mumunda wezvinwiwa zvakazadzwa, inodzivirira uye inokwanisa chete kuvharisa ndiyo inogona kuparadza kana kuuraya ma enzyme nema microorganism muchinwa chayo pachayo, uye nekuona kuti zvigadzirwa zvinosangana nekutengesa kushaya zvinodiwa. Naizvozvo, kupisa kwemafuta ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuona kuchengetedzwa kwechigadzirwa, uye ndeimwe yezvakakosha zvinodiwa neUS FDA kune vagadziri vechikafu uye chinwiwa. Nekudaro, hapana muyero yunifomu yekuongorora kwekupisa kwekushisa kwemidziyo yekuchenesa kumba nekune dzimwe nyika, asi izvo zvinodiwa naNestl zvakanyanya. Vagadziri vezvigadzirwa chete vane mhando yepamusoro, mashandiro akavimbika uye nehurongwa hwenzwi hunogona kuverengerwa mune yavo runyorwa rwevanopa. Uhu zvakare hwaro hweDTS kupona, kukura uye kubudirira.
DTS ine yehunyanzvi, mudiki uye ine simba R & D timu, "yepamusoro-magumo, chaiyo, yepamusoro-notch" yekugadzirisa michina, inotsvaga shanduko mukutsvaga, inovandudza mukuchinja. Ini ndinotenda kuti DTS ichaenda kure nekure nekugadzira hupenyu huri nani.